တိုးချဲ့-အနက်ရောင်ယင်ကောင်စနစ် ထူထောင်ခြင်း | ECHOcommunity.org
Screen (5.39 MB)
Screen (2.23 MB)
Screen (2.2 MB)
Screen (2.11 MB)
Screen (1.84 MB)
Screen (1.41 MB)
By: Sombat Chalermliamthong and Patrick Trail, ECHO Asia Impact Center
[အယ်ဒီတာမှတ်ချက် - ဤအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်မှုသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင် မြို့တွင်ရှိသောအီးစီအိပ်ချ်အိုအာရှအသေး စားလယ်ယာရင်းမြစ်စင်တာ၏ ဘီအက်စ်အက်(ဖ)ထုတ်လုပ်မှုစနစ်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤအရာသည် လက်တွေ့ကျသည့်စနစ်နမူနာတစ်ခုသာြဖစ်၍ ဒေသအခြေအနေနှင့်ထည့်၀င် အသုံးပြုရမည့်ပစ္စည်းရနိုင်မှုအပေါ်တွင်မူတည်၍သင့်လျော်သလိုပြုပြင်အသုံးပြုရပါမည်။ဤဆောင်းပါးသည်နောက်ဖေးခြံနှင့်မိသားစုဘီအက်စ်အက်(ဖ)ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍စုံလင်စွာရေးသားထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုပေါင်းစည်းကာ“တိုးချဲ့”စနစ်ကိုပီပြင်စွာရေးသားဖေါ်ပြရန်ဖြစ်သည်။]
Author displays healthy Black Soldier Fly larvae to workshop participants at the ECHO Asia Small Farm Resource Center.
အသေးစားလယ်ယာလုပ်ငန်းများ၏အောင်မြင်မှုတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုတန်ဖိုး-ထပ်ဆောင်းပေးသည့်ထုတ်ကုန် အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သောအရည်အချင်းသည်အဓိကကျပါသည်။အနက်ရောင်ယင်ကောင်(ဟာမီထီယာ အီလူစင်) ကိုလယ်ယာလုပ်ငန်းတွင်ပေါင်းစည်းပေးခြင်းဖြင့်အသေးစားစီးပွားရေးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။မုန့်အကြွင်းအကျန်နှင့်နောက်ခြေး/မြေသြဇာစသည့်သာမန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုယူ၍အနက်ရောင်ယင်ကောင်များအားအသုံးပြုခြင်းဖြင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကုန်ကြမ်းမှပရိုတင်းအလွန်မြင့်သည့်မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်အစာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်အပြင်တချိန် တည်းမှာပင်မြေဆီပြုပြင်မည့်ကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်လည်းထုတ်နိုင်သည်။
ဘီအက်စ်အက်(ဖ)ပိုးလောင်းထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ပရိုတင်းအစာရင်းမြစ်ရရှိရန်ခက်ခဲသောဒေသများအတွက်အထူး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အလွန်၀ေးလံသည့်တောင်တန်းဒေသများတွင် ငါးစာနှင့်/သို့မဟုတ်ပဲဖတ်များ ကဲ့သို့သောပရိုတင်းပြည့်သည့်အစာများကို၀ယ်ရန်အကန့်အသတ်ရှိသဖြင့် ၀က်များ၊ကြက်များနှင့်ငါးများမွေးမြူရာ တွင်လိုသလောက်မွေးမြူနိုင်ခြင်းမရှိကြပါ။ဘီအက်စ်အက်(ဖ)ပိုးလောင်းများကိုလူသားများပင်အန္တရာယ်ကင်းစွာစားသုံးနိုင်သည်။ဤစာစောင်တွင်မူ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်အစာထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအဓိကထား၍ဖေါ်ပြမည်။
ဘီအက်စ်အက်(ဖ)ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အားသာချက်များစွာရှိ၍အားနည်းချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။သီးခြားမှတ်ချက် များတွင် ဘီအက်စ်အက်(ဖ)များသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအညစ်အကြေးများကို ပြောင်းလဲစေသည့်အလွန်ထိရောက်မှုရှိ သည့်အရာ၊လျင်မြန်စွာထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အရာနှင့်အခြားသောမွေးမြူရေးသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နှိုင်းစာလျှင်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည့်အရာအဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။အနက်ရောင်ယင်ကောင်များသည်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါပိုးမဟုတ်သည်ကိုမှတ်သားထားရန်အရေးကြီးပါသည်။ထိုသို့ယူဆခြင်းမှာအထင်အမြင်လွဲမှားခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ဘီအက်စ်အက်(ဖ)သည်ရောဂါရင်းမြစ်မဟုတ်သကဲ့သို့ကိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်တုပ်ခြင်း(ပျားကဲ့သို့)မရှိပါ။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အသုံး၀င်သည့်ပရိုတင်း-မြင့်မားသော အစာရင်းမြစ်အဖြစ် ထိရောက်စွာ ပြောင်းလဲ နိုင်သည်။
သားလောင်းသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွင်ရှိသည့် ပက်သိုဂင် များကိုသက်၀င်ခြင်းမရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
လူသားများအတွက်ပိုးမွှားအဖြစ် သို့မဟုတ် ရောဂါလမ်း ကြောင်းအဖြစ်ယူဆထားခြင်းမရှိပါ။
ဘီအက်စ်အက်(ဖ)သည် သက်တမ်းတို၍လျှင်မြန်စွာထုတ်လုပ် နိုင်သည်
ပုံ ၁။ အနက်ရောင်ယင်ကောင်(ဟာမီထီယာ အီလူစင် ) ပိုးတုံးလုံး(သားလောင်း)အဟာရတမျိုးစီ၏ဖွဲ့စည်းမှု(ရေဓါတ်ထုတ်ထားသည်)။ အချက်အလက်ရင်းမြစ် - ဖီးဒီဖီဒီယာ၊ ၂၀၂၁
ဘီအက်စ်အက်(ဖ)ပိုးလောင်းများသည်အဟာရအရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးနှစ်မျိုးစလုံးပြည့်လျက်ရှိသည်။ပရို တင်းမြင့်သည့်ရာခိုင်နှုန်းအဆင့်များနှင့်အဆီဓါတ်ပါ၀င်မှုမြင့်သည့်အပြင်ပိုးလောင်းများသည်မိုက်ခရိုနယူထရင့်၊ချိတင်များ၊အမိုင်နိုအက်စစ်များနှင့်ဗီတာမင်ဓါတ်များအပါအ၀င်အဟာရဖြည့်စွက်မှုဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အ၀ပေး သည်။အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည့် ပုံ ၁ သည်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)များပေးနိုင်သည့်အဟာရဖွဲ့စည်းပုံကိုဖေါ်ပြထား သည်။အသေးစိတ်နှင့်အဟာရတမျိုးစီ၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်အတွက် Barragan-Fonseca et al., 2017 တွင်ကြည့်ပါ။
ဤလမ်းညွှန်ဓါတ်ပုံသည်ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြို့ပြင်တွင်ရှိသည့်အီးစီအိပ်ချ်အိုအာရှ၏အသေးစားလယ်ယာရင်းမြစ်စင်တာ၏အနက်ရောင်ယင်ကောင်များထုတ်လုပ်သည့်စနစ်ကိုအခြေခံထားသည်။ဤသီးခြားစနစ်သည်လယ်ယာများတွင်ရှိသည့်ကြက်များနှင့်ငါးများကိုကျွေးရန်အစာအတွက်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)သားလောင်းများကိုတည်ငြိမ်စွာမွေးမြူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။သို့သော်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုကျယ်ပြန့်စွာသို့မဟုတ်စက်မှုထုတ်ကုန်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း မပြုသင့်ပါ။ဘီအက်စ်အက်(ဖ)စနစ်များကိုတည်ထောင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ရေဆွဲပုံးများ၊ပုံးကြီး/သေတ္တာများနှင့်စည်များကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍ထုတ်လုပ်ခြင်းများကိုအွန်လိုင်းတွင်များစွာတွေ့ရှိပါနိုင်ပါသည်။သို့သော် ထိုစနစ်သည်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးနှင့်ဘ၀ဖြစ်စဥ်တလျောက်တွင်ပိုးလောင်းအမြောက်အများထုတ်လုပ် ရန်ရည်ရွယ်သည်။စာရေးနေသည့်အချိန်တွင်ဤစနစ်သည်တပတ်လျှင်သားလောင်း၁၀ကီလိုဂရမ်တသမတ်တည်း ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
အဆင့် ၁။ အစပြုခြင်း
ဤဆောင်းပါး၏ရှေ့ပိုင်းတွင်မှတ်သားခဲ့ရသည့်အတိုင်းပင် ဟာမီထီယာ အီလူစင် (ပုံ ၂)သည် မိမိ၏မူရင်းဒေသဖြစ် သည့်အမေရိကဒေသများမှတဆင့်ယခုအခါတွင်ကမ္ဘာအနှံ့အပြား၌သာမန်အဖြစ်တွေ့ရှိရသောပိုးကောင်အဖြစ်တည်ရှိ နေပြီဖြစ်သည်။ဘီအက်စ်အက်(ဖ)ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကိုအစပြုရန်ယင်ကောင်အရိုင်းများမှ သို့မဟုတ်ဒေသတွင် ၀ယ် ယူခြင်းဖြင့်စတင်မွေးမြူနိုင်သည်။ဤစာစောင်မှ ဤစာကိုဖတ်ရှုနေသူများသည် ဥများ၊ပိုးလောင်းသို့မဟုတ်အရွယ် ရောက်သည့်ယင်ကောင်များလက်၀ယ်ရရှိကာ စတင်မွေးမြူနေသည်ဟုမှတ်ယူပါမည်။
ပုံ ၂။ အရွယ်ရောက်သည့်အနက်ရောင် ယင်ကောင် (Hermetia illucens)
အဆင့် ၂။ မိတ်လိုက်ရန်အရံအတားဆောက်ပေးခြင်း
ဘီအက်စ်အက်(ဖ)အတွက်မိတ်လိုက်အရံအတားဆောက်ခြင်းသည်ဥများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီး၍ ဘီအက်စ်အက်(ဖ)သားလောင်းထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကအဆင့်ဖြစ်သည်။ထိုသို့ကာရံခြင်းသည်ရည်ရွယ်ထားသည့်စီးပွားရောင်း၀ယ်ရေးအတိုင်းအတာအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ရွေးချယ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်သည့် ပစ္စည်းများရရှိနိုင်မှု။မိတ်လိုက်ရန်အရံအတားများသည်အထက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည့်အီးစီအိပ်ချ်အိုအာရှမွေးမြူရေးပုံစံ သို့မဟုတ်ခြင် ထောင်သို့မဟုတ်အ၀တ်လျော်သည့်အခါအသုံးပြုသည့်စကာကွက်စသည့်အရာများ လောက်သေး ငယ်နိုင်သည်။မည်သည့်အရွယ်နှင့်ပုံစံဖြစ်စေထိုအရံအတားအထဲတွင်လုံလောက်သည့်အစိုဓါတ်နှင့်အပူချိန်ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ယင်ကောင်များအပြင်သို့မထွက်ရန်နှင့်ငှက်နှင့်ကြွက်ကဲ့သို့သောအကောင်များမ၀င်နိုင်ရန်အတွက်အရံအတားကိုသေချာစွာပိတ်ရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။
ဤအရံအတားများအတွင်းတွင်အရွယ်ရောက်သည့်ယင်ကောင်များအတွက် ရေသွင်းရန်၊သဘာ၀ပေါက်ပင်နှင့်မျက်နှာ ပြင်တွင်ပုန်းနေရန်နှင့်မိတ်လိုက်ရန်နေရာ၊အမများဥဥရန်”အမှောင်ခန်း”များအတွက်အပါအ၀င်အကန့်အနည်းငယ်ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။သူတို့၏ဘ၀ဖြစ်စဥ်တလျှောက်တွင် ပိုးတုံးလုံးဖြစ်စေ အရွယ်ရောက်သည့်ယင်ကောင်ဖြစ်စေ အစာ လုံး၀စားမည်မဟုတ်ပါ၊ထို့ကြောင့်အမများဥဥရန်အတွက်သွေးဆောင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ကျွေးရန်အစာအနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်။
ပုံ၃။ကာရံထားသည့်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)မိတ်လိုက်အရံအတားအတွင်း၌အမှောင်ခန်းနှင့်အပေါ်မှစိုထိုင်းဆကိုထိန်းပေးသောဖျန်းသည့် ကရိယာပါ၀င်သည်။ဤနေရာတွင်အရွယ်ရောက်သည့်ယင်ကောင်များမိတ်လိုက်၍အမများမှဥများ ဥမည်။
အရွယ်ရောက်သည့်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)အမများ၏ဥများကိုစုစည်းကောက်ယူနိုင်ရန်မိတ်လိုက်သည့်အခန်းအကန့်များတွင်ဖန်တီးမှုများပြုလုပ်ပေးရပါသည်။အီးစီအိပ်ချ်အိုအာရှမွေးမြူရေးစခန်းများတွင်သစ်တုံးငယ်များသည်ကောင်းစွာ အလုပ်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်၊ယင်ကောင်အမများဥ-ဥရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်ပတ်၀န်းကျင်နှင့်အလုပ်သမားများဥကောက် ရန်အဆင်ပြေစေရေးနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဖန်တီးပေးရန်လိုသည်။ကတ်ထူငယ်များကိုဥဥရန်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြု ခြင်းသည်သဘာ၀ပင်ဖြစ်သည်(၀မ်၊၂၀၂၀)။သို့သော်ကျွန်ပ်တို့အနေဖြင့်အရှေ့ပိုင်းတွင်ဖေါ်ပြထားသည့်နည်းကိုပို၍နှစ်သက်ပါသည်၊အကြောင်းမှာဥများကိုကောက်ယူရန်ပိုမိုအဆင်ပြေ၍ဥအရေအတွက်ပို၍များနိုင်သောကြောင့်ဖြစ် သည်။ဤအဆင့်တွင်မှတ်သားသင့်သည့်အရေးကြီးသည့်အရာမှာဘီအက်စ်အက်(ဖ)များသည်အစာလမ်းကြောင်းများအပေါ်(သို့မဟုတ်အထဲ)တွင်တိုက်ရိုက်ဥများကိုမဥပါ၊အနီးအနားတွင်ဥကြသည်။ထို့ကြောင့်ဥဥမည့်အတုံးများသည်ပုံ ၄ တွင် ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်းအစာလမ်းကြောင်း(ရင်းမြစ်)များအနားတွင်ရှိရမည်။
ပုံ၄။ ဘီအက်စ်အက်(ဖ)အမများဥရန်အတွက်မွေးမြူရေးအခန်း၊အက်ကြောင်းငယ်များပေးထားသည့်သစ်တုံးများကို ထားပေး သည်။အတုံးများကိုအစာလမ်းကြောင်းအပေါ်တွင်ထားသည်၊သို့သော်အစာလမ်းကြောင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။
ဥများကိုကောက်ယူရန်အတုံးများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ခွဲခြားထားခြင်းနှင့်သေချာစွာခြစ်ထုတ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမည်။ဤအဆင့်တွင်အတုံးများကိုနေ့စဥ်မရွှေ့ပေးပါကဥများ၏သက်တမ်းမှာတူညီမည်မဟုတ်သည်ကိုမှတ်သားရန်အရေးကြီးပါသည်။မတူညီသောဥသက်တမ်းရောနှောနေခြင်းဖြင့်သားလောင်းများသည်လည်းမတူညီသောအချိန်တွင်ပေါက်၍ကြီးထွားလာမည်။ထိုအခါတွင်ဥများရင့်လာသည့်အခါရွေးယူခြင်းနှင့်ခွဲခြားရသည့်အလုပ်များပိုလာမည်။အကောင်းဆုံးမှာဘီအက်စ်အက်(ဖ)အမြောက်အများထုတ်လုပ်သည့်အခါအသက်တူသည့်ရင့်သောဥများကိုရယူရန်ဖြစ်သည်။ထုံးစံအတိုင်းပင်ယင်ကောင်အမများသည်သူတို့၏သက်တမ်းအတွင်း ဥ ၃၀၀မှ ၄၀၀အထိ ဥပါမည်။
းဥများကိုစုစည်းပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့သည်ပေါက်မည့်အစာလမ်းကြောင်းသို့ရွှေ့နိုင်သည်။အနီးရှိအစာထားရာနေရာသို့မိမိဖာသာတွားသွားကြမည်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဥများဥပြီးနောက်၄ရက်ကြာလျှင်အကောင်ပေါက်ပါသည်။ဤအ ဆင့်တွင်သားလောင်းများသည်ငယ်နေသေးပါကပလပ်စတစ်ဗန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကျန်ရှိနေသည့်အစာ/အကြွင်း အကျန်များနှင့်သားလောင်းများကိုထည့်နိုင်သည်။အစာလမ်းကြောင်း(ရင်းမြစ်)နှင့်ဥများတိုက်ရိုက်တွေ့ထိမှုမရှိစေရန်စကာကွက်များကိုအသုံးပြုသည်။
ပုံ ၆။ စုစည်းထားသည့်ဥများကိုအစာလမ်းကြောင်းအပေါ်တွင်ညင်သာစွာချထားနိုင်သည်။ ဥများကိုအစာ၏စိုစွတ်မှု များနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိစေရန်စကာကွက်ပိုက်များအပေါ်တွင်ဥစေပါသည်။ ဥများပေါက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် အစာလမ်းကြောင်းများသို့မိမိတို့ဖာသာရှာ၍သွားကြလိမ့်မည်။
အနက်ရောင်ယင်ကောင်များ၏ကြီးမားသည့်အကျိုးကျေးဇူးများအထဲမှတစ်ခုမှာ ထုတ်လုပ်ကုန်မျိုးမျိုး၊စျေးထဲမှစွန့် ပစ်ပစ္စည်း(အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်)၊မြေဆွေးများ၊စားကြွင်းစားကျန်များ၊အရိုးအကြွင်းအကျန်များနှင့် အခြား သောများစွာသောကုန်ပစ္စည်းများကို ကျယ်ပြန့်စွာစားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်အစာရင်းမြစ်များကို စာရင်းပြုစုရေးသားဖေါ်ပြမည်မဟုတ်ပါ၊သို့သော်”စွန့်ပစ်ပစ္စည်း”ဟုခေါ်ကြသည့်အရာ၏ရင်းမြစ်များကိုမိမိတို့ အ တွက်မည်သည့်နေရာမှရနိုင်မည်ကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။အကောင်းဆုံးမှာစျေးသက်သာသော သို့မဟုတ် အလကား ရနိုင်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုဦးတည်ရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့တွင်စျေးထဲမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှအစာအကြွင်း အကျန်၊စပါးမှထွက်သည့်ဖွဲနုအကျန်၊ကဇော်ဖေါက်/နှပ်ထားရာမှကျန်သည့်အစေ့အဆံများနှင့်ပဲဖတ်များအပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
ပုံ ၇။ ဤပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းနာနတ်သီးအလေအလွင့်ကဲ့သို့သောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ - ဘီအက်စ်အက်(ဖ) ပိုးလောင်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်ရှိနေသည့်များစွာသောအစာရင်းမြစ်များ။
မျှတမှုရှိရန် သို့မဟုတ်”စုံလင်သော”အစာရင်းမြစ်ဖြစ်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအကြွင်းအကျန်ရင်းမြစ်များကိုရော နှောရန်အကြံပြုပါသည်။ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မည့်သားလောင်းမြောက်များစွာရရှိစေမည့်”အလေးချိန်တိုး၍သန်စွမ်း“စေသည့်အစာများဖြစ်စေသည်။
ပုံ ၆။ ဘီအက်စ်အက်(ဖ)သားလောင်းများကျန်းမာသန်စွမ်းစွာအမှန်တကယ်ကြီးထွားစေရန်ဖွဲနုနှင့်ပဲဖတ်ကဲ့သို့သော အရည်အသွေးမြင့်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအရည်အသွေးနိမ့်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြင့်ရော၍ကျွေးနိုင် သည်။
အဆင့် ၆။ ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ခြင်း
သားလောင်းများပေါက်၍အစာကျွေးသောကြောင့် လုံလောက်သည့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ၎င်းတို့သည်ပို၍ကျယ်သည့် သေတ္တာသို့မဟုတ်အကန့်များသို့ ”တိုးချဲ့“ ရန်လိုအပ်လာပါလိမ့်မည်။ဤအဆင့်အတောအတွင်းထပ်ဆောင်းအစာများကိုသားလောင်းများစားရန်ချန်ထားပေးသည်။
***မှတ်ချက်-နံစော်သည့်အနံ့နှင့်ပုပ်သိုးသည့်အစာများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အစိုဓါတ်ကိုထိန်းရန်အလွန်အရေးကြီး ပါသည်။အစာအပုံသို့မဟုတ်အကြွင်းအကျန်များအားအောက်ဆီဂျင်ကင်းသည်အထိမည်သည့်အခါမျှမထားရပါ။ ဗန်း သို့မဟုတ်အကန့်များတွင်စိုထိုင်းသည့်အရာများဝပ်မနေရန်၎င်းတို့ကိုထုတ်သည့်လမ်းကြောင်းရှိရမည်။အီးစီအိပ်ချ်အို အာရှစခန်းတွင်စိုစွတ်မှုကိုစုပ်ယူရန်လိုအပ်သည့်အခါတွင်ဖွဲနုသို့မဟုတ်ဆန်မှုန့်များကိုအသုံးပြုသည်။
ပုံ ၉။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင်ရှိသည့်ဒေသတစ်ခု၏အချိုးကျစွာတိုးတက်သည့်အနက်ရောင်ယင်ကောင်စနစ်။ဤလယ်ယာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးစီကိုအကန့်များကန့်ထားသည်၊ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)သားလောင်းတို့၏ဘ၀ဖြစ်စဥ်ကာလအတွင်းအဆင့်ဆင့်တွင်ကြီးထွားလာစေသည်။
အဆင့် ၇။ သားလောင်းများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်သိမ်းရမည်ကိုသိခြင်း
နောက်၁၃ ရက်မှ၁၈ရက်အတွင်းသားလောင်းများကိုအပြင်းအထန်အစာကျွေးမည်၊၎င်းတို့သည်နေ့စဥ်၎င်းတို့၏ ကိုယ် ခန္တာအလေးချိန်နှစ်ဆစားကြမည်။ဤအချိန်အတောအတွင်းမိမိနှစ်သက်သည့်အဆင့်တွင်စုသိမ်းနိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။သားလောင်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်၊ပိုးတုံးလုံး-အကြိုအဆင့်မတိုင်မီ(ပုံ ၁၀)အချိန်တွင်သား လောင်းများသည်အစာရင်းမြစ်အဖြစ်ကျွေးရန်အဟာရအမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည် (ဘာရာဂန်-ဖွန်စီကာ နှင့်အခြား ၂၀၁၇)။ရိတ်သိမ်းမှုနောက်ကျပါကထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်အရည်အသွေးညံ့သည့်အစာကိုရနိုင်သည်၊အလွန်စောစွာ ရိတ်သိမ်းပါကထပ်ဆောင်းအလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစားကိုဆုံးရှုံးရမည်၊ဆိုလိုသည်မှာထွက်သင့်အလောက်ရရှိမည်မ ဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအဆင့်တွင်သားလောင်းများကိုစုစည်းသိမ်းယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ကိုသတိပြုမှတ်သားရမည်၊ဤအဆင့်ဟုဆိုရာတွင်အရွယ်မရောက်မှအချိန်ဖြစ်၍၎င်းတို့ကို၎င်းတို့၏အစာပစ္စည်းများမှရွေးထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ခွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်အလုပ်ရှုပ်နိုင်သဖြင့် ဤအဆင့်တွင်အရွယ်အမျိုးမျိုးကိုစစ်ထုတ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ရွေးထုတ်ရန်လှုပ်ခါသည့်စက်ကရိယာရှိပါသည်၊ ၎င်းတို့ကိုပြုပြင်၍ဤလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပုံ ၁၀။ အနက်ရောင်ယင်ကောင်(Hermetia illucens)၏ဘ၀ဖြစ်စဥ်သည်ခန့်မှန်းအားဖြင့်၎င်း၏သက်တမ်းတခုလုံး အတွင်း၄၅ရက်ကြာသည်။ပိုးတုံးလုံး-အကြိုအဆင့်မရောက်မီအချိန်သည်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)သားလောင်းများသည်အစာရင်းမြစ် အတွက်အဟာရအရည်အသွေးမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်ရင်းမြစ် - Nutrinews 2020
အဆင့် ၈။ ရွေးထုတ်ခြင်းနှင့်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း
သားလောင်းများကိုအဟာရအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်၎င်းတို့စားသည့်အစာကိုကျွေးသည့်ပစ္စည်းများမှ ”သိမ်းယူ”ရမည်။ဤအဆင့်တွင် သားလောင်းများကိုသီးခြားထားရန်ရွေးထုတ်ခြင်းနှင့်အရွယ်သတ်မှတ်ခြင်းအဆင့် များပါ၀င်သည်။ဤသို့ပြုလုပ်ရာတွင်စကာအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်လုပ်နိုင်သည်။ထုတ်လုပ်မှုအဆုံးတွင်ပို၍ညက်သည့်အစာရင်းမြစ်သို့သားလောင်းများကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက်ပို၍လွယ်ကူစေ၍ ခွဲထားရန်လည်းပို၍လွယ်ကူ စေသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်လက်ဖြင့်လှုပ်ခါခြင်းသို့မဟုတ်လှုပ်ခါစက်ဖြင့်ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ခြင်းစသည့်နည်းများဖြင့် လုပ်နိုင်သည်၊၎င်းသည်တီကျစ်စာစနစ်များတွင်အသုံးပြုသည့်နည်းပညာများနှင့်ဆင်တူသည်။တိုက်ရိုက်ကျွေးသည့်သားလောင်းများအတွက်၎င်းတိုကိုလုံး၀အကုန်အစင်သန့်စင်ရန်မလိုပါ။
ပုံ ၁၁။ ဘီအက်စ်အက်(ဖ)များကိုရွေးထုတ်ခြင်းနှင့်အရွယ်သတ်မှတ်ခြင်း
အဆင့် ၉။ နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ခြင်း
ဤသားလောင်းများသည်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးအဆင့်နှင့်အဟာရကြွယ်၀ဆုံးအချိန်၊ ပိုးတုံးလုံးအဆင့်မရောက်မီအချိန်ဖြစ်၍ ၎င်းတို့၏အဟာရတန်ဖိုးစတင်ကျလာသည့်အချိန်လည်းဖြစ် သည်။
ပုံ ၁၂။ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်!
အဆင့် ၁၀။ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်၍ ပိုးတုံးလုံးမွေးမြူခြင်း
ဘီအက်စ်အက်(ဖ)စနစ်အများစုသည်မိမိဖာသာ-သိမ်းယူသည့်သဘာ၀ရှိသည့်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)ပိုးတုံးလုံး၏အားသာ ချက်ကိုရယူအသုံးပြုကြသည်။၎င်းတို့၏ဘ၀တလျောက်ဤအဆင့်တွင်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)တစ်ကောင်သည်၎င်း၏အစာရင်းမြစ်ရှိရာမှထွက်ခွာ၍အရွယ်ရောက်သည့်ယင်ကောင်အဖြစ်သို့အသွင်ပြောင်ရန်အတွက်ပို၍မှောင်၍တိတ်ဆိတ်သည့်နေရာကိုရှာရန်ထွက်ခွါသွားသည်။ အထက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည့်ဥပမာတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း(ပုံ ၁၃)အစာ ရင်းမြစ်ရှိသည့်နေရာမှတွား၍ထွက်လာသည့်ပိုးတုံးလုံးများကိုဥပုံးသို့မဟုတ်အခြားသောစုစည်းရန်ပြုလုပ်ထားသည့်နေရာများသို့လမ်းကြောင်းပေးသည့်မြောင်းငယ်များစွာပြုလုပ်ထားသည်။ဤအရာသည်အလွန်ပင်အဆင်ပြေသည့်သဘာ၀ဖြစ်စဥ်ဖြစ်သည်၊သို့သော်အစောပိုင်းတွင်ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်းပိုးတုံးလုံးအဆင့်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)သည်အစာရင်းမြစ်အဖြစ်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်သွားသည့်အချိန်တွင်သာဖြစ်ပေါ်သည်။
ပုံ ၁၃။ မိမိဖာသာ-သိမ်းယူသည့်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)သားလောင်းအကန့်။ ပိုးတုံးလုံးသည်၎င်းတို့၏ ပိုးတုံးလုံးသံသရာ အဆုံးသို့ရောက်သည့်အခါ၎င်းတို့၏အစာရင်းမြစ်မှတွား၍ထွက်သွားပြီး၎င်းတို့အားစုစည်းကောက်ယူနိုင်သည့် ကျင်း/မြောင်းထဲသို့ကျသွားသည်။
ဘီအက်စ်အက်(ဖ)စနစ်ကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာဖြစ်စေကာမူစတင်ခြင်းမပြုမီငှက်များ၊ကြွက်များကဲ့သို့သောဖျက်ပိုးများနှင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက်၍ကြိုတင်စဥ်းစားသင့်သည်။ပိတ်ထားသောအခန်းမျိုးများတွင်ယင်ကောင်များကို အတွင်း၌ထားပြီးမလိုလားအပ်သည့်ဖျက်ပိုးများကိုအပြင်၌ထားရန်လိုအပ်သည်။ကံမကောင်းစွာဖြင့်လိုအပ်ချက်ဖြစ် သည့်အကာကာခြင်းနှင့် ပိုက်များသည်စျေးကြီးနိုင်၍ထုတ်လုပ်သူများကိုသိသာစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အစောပိုင်းတွင်ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်းမည့်သည့်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)စနစ်တွင်မဆိုအစိုဓါတ်ကိုစနစ်တကျထိန်းရန်အ လွန်အရေးကြီးပါသည်။သစ်သီးအကြွင်းအကျန်များကဲ့သို့သောအစာအကြွင်းင်းအကျန်များသည်အစိုဓါတ်အလွန်များ သည့်အရာများဖြစ်သဖြင့်အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်မဲ့သည့်စနစ်များသို့ဦးတည်သွားနိုင်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှတားမြစ်ရန် မှာစနစ်တခုလုံး၏အောင်မြင်မှုအတွက်အလွန်အရေးသည်သာမက၊အနံ့များနှင့် မိမိပတ်၀န်းကျင်နှင့်ဖောက်သည်များ ၏နောက်ဆက်တွဲထင်မြင်ချက်များအတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်။အထက်ကဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမြောင်းများတပ်ဆင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်အစိုဓါတ်ကိုလျှင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်သည့်ဖွဲနုနှင့်ဆန်မှုန့်များကဲ့သို့သောအရာများကိုအသုံးပြု ခြင်းဖြင့်ထိန်းနိုင်အောင်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။
ပုံ ၁၄။ အီးစီအိပ်ချ်အိုအာရှမွေးမြူရေးလယ်ယာတွင်စျေးကွက်မှ၀ယ်ယူသောကြက်စာများကိုဘီအက်စ်အက်(ဖ)သားလောင်းများ အားအချိုးအမျိုးမျိုးဖြင့်ထပ်ဆောင်းထားခြင်းကိုနှိုင်းယှဥ်ပြပုံ။ဤနေရာတွင်သားလောင်းများကိုအကောင်လိုက်ထည့်သည်။
လူသားများစားသုံးရန်အတွက်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)သားလောင်းထုတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အဓိကတွန်းအားမှာမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ၊အထူးသဖြင့်ငါးနှင့်ကြက်များအတွက်အစာရင်းမြစ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။သားလောင်းများကိုတိုက်ရိုက်ကျွေးနိုင်သည်၊သို့မဟုတ်လက်ရှိရှိနေသည့်အစာအချိုးတွင်ပေါင်းထည့်၍ကျွေးနိုင်သည်။အီးစီအိပ်ချ်အိုအာရှမွေးမြူရေးလယ်ယာရှိ၀န်ထမ်းများသည်စျေးကွက်တွင်ရောင်းချ သည့်ငါး နှင့်ကြက်စာများကိုဘီအက်စ်အက်(ဖ)သားလောင်းအချိုးအမျိုးမျိုးဖြင့်စမ်းသပ်ကျွေးမွေးလျက်ရှိသည်(ပုံ ၁၄)။ ထုတ်လုပ်သူများတွင်ရှိသည့်သားလောင်းများကိုလက်တွေ့ကျကျနှင့်ပုံမှန်အသုံးပြုရန်မိမိတို့၏အခြေအနေနှင့် ရနိုင် သည့်ပစ္စည်းများအပေါ်မူတည်၍၎င်းတို့အားနဂိုအတိုင်း၊တကောင်လုံး၊ကြိတ်၍သို့မဟုတ်အအေးခန်းတွင်သို လှောင်၍ကျွေးနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်သည့်သားလောင်းများအပြင်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)များသည်တီကျစ်စာ(ဗာမီခတ်စ်)နှင့်တူသည့်တန်ဖိုးရှိသည့်မြေဆွေးကိုချန်ခဲ့သည်။”တီကျစ်စာ”သို့မဟုတ်”သားလောင်းအကြွင်းအကျန်”များကိုမြေဆီကြွယ်၀ရန်အတွက်ထည့် နိုင်သည်၊ထိုသို့ထည့်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တခုလုံးအားတန်ဖိုးတိုးစေသည်။စျေးကွက်များတွင်ဤကဲ့သို့သောအ ကြွင်းအကျန်များကိုအများအားဖြင့်အိတ်များနှင့်ထည့်၍ သီးခြားကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်ရောင်းသည်၊ အခြား၀င်ငွေတိုးလုပ် ငန်းဖြစ်သဖြင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်စဥ်းစားသင့်သည်။ အနည်းဆုံးဤထုတ်ကုန်ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခင်းများ၊ပျိုးပင်အိုးများစသည်ဖြင့်-တွင်ရောနိုင်သည်........
ပုံ ၁၅။ ဘီအက်စ်အက်(ဖ)”ကျစ်စာ”သို့မဟုတ်”သားလောင်းအကြွင်းအကျန်”။ ဘီအက်စ်အက်(ဖ)ထုတ်လုပ်သည့်စနစ် များမှတန်ဖိုးဖြစ်စေနိုင်သည့်ဘေးထွက်ပစ္စည်း။
ဘီအက်စ်အက်(ဖ)ထုတ်လုပ်မှုသည်မွေးမြူရေးစခန်း(လယ်ယာ)တိုင်းသို့မဟုတ်အခြေအနေတိုင်းအတွက်အကျိုးဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။မည်သည့်အောင်မှုအတွက်မဆိုဘီအက်စ်အက်(ဖ)ကိုမွေးမြူရာတွင်ကျွေး မည့်အစာဖိုးတတ်နိုင်သော-အခမဲ့ရနိုင်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါကပို၍ကောင်းပါသည်။အစာရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ် သည်။အများအားဖြင့်ဘီအက်စ်အက်(ဖ)ကို မြေဆွေးမြေသြဇာနှင့်အခြားသောဘေးထွက်ပစ္စည်းကဲ့သို့သော လယ်ယာ ထွက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားစီးပွားရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဟုသတ်မှတ်ကြသည်။
စာရေးသူအနေဖြင့် Phai BSF Ecofarm CNX မှ မစ္စတာ ပိုင်အားမိမိ၏ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုလိုလားစွာ မျှ၀ေပေးသောကြောင့်အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။